“ဟဂ်ျရိအပ်စ်ဝဒ် ကျောက်နက်တုံး၏ ထူးခြား ဆန်းကြယ် ဖြစ်ရပ်များ” | Pure Sunni (Ya Robbae Salle Wasllim Ala Mohamadin)
← အစ္စလာမ်ကို ထောက်လှမ်းခြင်း
နဗီတမန်တော်ရှိုအိုင်းဗ် (အ) အကြောင်း →
ကအ်ဗဟ်ကျောင်း နံရံတွင် ကပ်ထားသည့် ငွေဖြင့် ခိုင်ခံ့စွာ ကွပ်ထားသော အနက်ရောက် ကျောက်တုံးအား ဟဂ်ျရိ အတ်စ်ဝဒ် ဟုခေါ်သည်။ ၎င်း ကျောက်နက်တုံး သည် သမိုင်း တစ်လျောက် တွင် အလွန် ထူးဆန်း အံ့ဖွယ် ဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်ပေါ် ခဲ့ပြီး ကြီးမားသည့် ပြောင်းလဲ မှုများ ဖြစ်ခဲ့သည်။
အစ္စလာမ့် သမိုင်း သုတေသီ များက ရေးသား ကြသည်မှာ- ဤ ကျောက်နက်တုံး သည် တမန်တော် အာဒမ် (အလိုင်ဟိစ် စလာမ်) နှင့် အတူ မြေပြင် ပေါ်သို့ ကောင်းကင် မှ ကျရောက် ခဲ့၏။ ၎င်းသည် ဂျန္နသ် မှ ကျောက်တုံး တစ်တုံး ဖြစ်၏။ အလ္လာဟ် အသျှင်မြတ် (စွဗ်ဟာနဟူ ၀သအာလာ) သည် ၎င်းကို မိမိ၏ လက္ခဏာတော် တစ်ရပ် အနေဖြင့် ချပေးတော် မူခြင်း ဖြစ်၏။
ဟဇ်ရသ် အိဗ်နေ့ အဗ္ဗာစ် (ရဿွိ ယလ္လာဟု အန်ဟု) သခင် ဆင့်ပြန် ခဲ့သည်မှာ တမန် တော်မြတ် (ဆွလ္လလ္လာဟု အလိုင်ဟိ ၀စလ္လာမ်) မိန့်တော် မူခဲ့၏။ ဤကျောက်နက်တုံး သည် ကောင်းကင် မှ ကျရောက် ချိန်တွင် နို့ထက်ပင် ပို၍ ဖြူဆွတ် နေ၏။ ၎င်းကို လူတို့၏ အပြစ် ဂိုနာဟ် များက အမည်း ဆိုးလိုက် ကြ၏။
အချို့ ပညာရှင် ကြီးများ၏ အဆိုမှာ- နူးဟ် (အလိုင်ဟိစ္စလာမ်) ၏ ခေတ် သမယ တွင် ရေလွှမ်းမိုး ချိန်၌ ဤ ကျောက်နက်တုံး ကို ဂျိဗ်ရာအိလ် (အလိုင်ဟိစ္စလာမ်) ကောင်းကင် တမန် သည် အဘူ ကူဘိုင်း(စ) တောင်တွင် ထိန်းသိမ်း ခဲ့ပြီး တမန်တော် အိဗ်ရာဟီးမ် (အလိုက်ဟိစ္စလာမ်) ၏ ခေတ်တွင် တမန်တော် အိဗ်ရာဟီးမ် (အလိုင်ဟိစ္စလာမ်) က ကျောင်းတော် အား အသစ် ပြန်လည် မွမ်းမံ ဆောက်လုပ်သော အခါ ဂျိဗ်ရာအီးလ် (အလိုက်ဟိစ္စလာမ်) ကောင်းကင် တမန် သည် ၎င်းတောင် မှ ပြန်လည် ယူဆောင် လာခဲ့ ပေသည်။
အချို့ အာလင်မ် သာသနာ့ ပညာရှင်ကြီး များ၏ အဆိုမှာ- တမန်တော် အိဗ်ရာဟီးမ် (အလိုင်ဟိစ္စလာမ်) က ကျောင်းတော် ကို ပြန်လည် ဆောက်လုပ် ရာတွင် ယခု ၎င်း ကျောက်နက် အား ချိတ်ဆွဲ ထားသည့် အမြင့်လောက် ရောက်ချိန်တွင် မိမိ သားတော် အိစ်မာအီးလ် (အလိုက်ဟိစ္စလာမ်) အား သွဝါးဖ် လှည့်သူများ သွဝါးဖ် စတင် လှည့်ရန် အမှတ် အသား အဖြစ် ကျောက်တုံး တစ်တုံး ရှာဖွေ စေရာ ဂျိဗ်ရာအီးလ် (အလိုက်ဟိစ္စလာမ်) ကောင်းကင် တမန် က နူးဟ် (အလိုက်ဟိစ္စလာမ်) ၏ ခေတ် ရေလွှမ်းမိုး ချိန်တွင် အလ္လာဟ် အသျှင်မြတ် (စွဗ်ဟာနဟူ ၀သအာလာ) အမိန့်ဖြင့် အဘူ ကူဘိုင်းစ် တောင်တွင် ထိန်းသိမ်း ထားသော ဟိဂ်ျရိ အတ်စ်ဝဒ် ကို ပေးအပ် လိုက်လေသည်။ သို့ရှိရာ တမန်တော် အိဗ်ရာဟီးမ် (အလိုင်ဟိစ္စလာမ်) သည် ၎င်းနံရံထောင့် တွင် တပ်ဆင် ခဲ့လေသည်။
“ပြဿနာ တစ်ရပ် ပေါ်ခဲ့ခြင်း”
တမန်တော် အိဗ်ရာဟီးမ် (အလိုင်ဟိစ္စလာမ်) ၏ ခေတ် အခါ သမယ နောက်ပိုင်း တွင် အာရဗ် လူမျိုး တို့၏ ကျော်ကြားသော အမျိုး အနွယ် တို့သည် ကအ်ဗဟ် ကျောင်းတော်ကြီး အား ပြန်လည် မွမ်းမံ၍ မူလ နေရာ ချထား ရာ၌ ကြီးများသည့် ပြဿနာ တစ်ရပ် ဖြစ်ပွား ခဲ့၏။ ၎င်း ပြဿနာ ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းမှာ မက္ကာမြို့ ရှိ မျိုးနွယ်စု တိုင်းမှ ဤ မွန်မြတ် လှသော အခွင့် အရေးကို ရယူလို သောကြောင့် ဖြစ်၏။ နောက်ဆုံး အခြေ အနေ မှာ တစ်မျိုးနွယ် နှင့် တစ်မျိုးနွယ် တိုက်ခိုက် ကြ တော့မည့် ဆဲဆဲ ဖြစ်ခဲ့ ရ၏။
နောက်ဆုံးတွင် အားလုံး တညီ တညွတ်တည်း ဖြင့် နောက် တစ်နေ့ နံနက်၌ ကျောင်းတော် သို့ အစောဆုံး လာရောက် သူသည် ၎င်း အခွင့် အရေး ရမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့ကြ လေသည်။
နောက် တစ်နေ့ နံနက်တွင် ကျောင်းတော် သို့ အစောဆုံး ရောက်ရှိလာ သူမှာ တမန် တော်မြတ် (ဆွလ္လလ္လာဟု အလိုင်ဟိ ၀စလ္လာမ်) ဖြစ်နေ၍ မွန်မြတ်သော အခွင့် အရေးကို ရရှိ ခဲ့၏။ ကိုယ်တော် သည် ဟဂ်ျရိ အတ်စ်ဝဒ် အား ခြုံစောင် ထဲတွင် ထည့်စေ၍ မျိုးနွယ် ခေါင်းဆောင် များအား မ စေသည်။ ကျောက်တုံး အား ထားရန် နေရာသို့ ရောက်ရှိ လာသော အခါ တမန် တော်မြတ် (ဆွလ္လလ္လာဟု အလိုင်ဟိ ၀စလ္လာမ်) သည် မိမိ၏ လက်တော်ဖြင့် ၎င်း ကျောက်တုံး အား ကျောင်းတော် ၏ နံရံတွင် တပ်ဆင် လိုက်လေသည်။ ၎င်း အဖြစ် အပျက် သည် တမန် တော်မြတ် (ဆွလ္လလ္လာဟု အလိုင်ဟိ ၀စလ္လာမ်) သက်တော် (၃၅)နှစ် အချိန်တွင် ဖြစ်ခဲ့သည်။
“ဂျန္နသ် အတွင်းမှ ကျောက်တုံး”
ဟဂ်ျရိ အတ်စ်ဝဒ် သည် ဂျန္နသ် မှ ကျောက်တုံး ဖြစ်ခြင့် နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သာဝက ကြီး အိဗ်နို့ အုမရ် (ရဒွိယလ်လာဟု အန်ဟု) မှ တစ်ဆင့် ဆင့်ပြန် ထားသော ရေ၀ါယသ်တော် တစ်ရပ် လာရှိ သည်မှာ- ကျွန်ုပ် သည် တမန် တော်မြတ် (ဆွလ္လလ္လာဟု အလိုင်ဟိ ၀စလ္လာမ်) ဤသို့ မိန့်တော်မူ သည်ကို ကြားသိ ခဲ့ရ ပါသည်။
ဟဂ်ျရိ အတ်စ်ဝဒ် နှင့် မကာမေ အိဗ်ရာဟီးမ် သည် ဂျန္နသ်၏ ကျောက်မျက် ရတနာ များမှ ရတနာ နှစ်ခု ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အလ္လာဟ် အသျှင်မြတ် (စွဗ်ဟာနဟူ ၀သအာလာ) သည် ၎င်း ကျောက်တုံး နှစ်ခုမှ လင်းဝင်း မှုကို အငြိမ်း ခဲ့သော် ကမ္ဘာ အရှေ့ဖျားမှ အနောက် ဖျားထိ လင်းဝင်း တောက်မ နေလိမ့်မည်။
၎င်း အချက်နှင့် ပတ်သက် ၍ သက်သေထူ ခဲ့သော ဖြစ်ရပ် တစ်ခု သမိုင်း တွင်ခဲ့သည်။
ဤ ဖြစ်ရပ် မှာ ကအ်ဗဟ် ကျောင်းတော် ကြီးအား ပြန်လည် ဆောက်လုပ် စဉ် တမန်တော် အိဗ်ရာဟီးမ် (အလိုင်ဟိစ္စလာမ်) သည် ဟဂ်ျရိ အတ်စ်ဝဒ် အား ကျောင်းတော် ၏ နံရံ၌ တပ်ဆင်သော အခါ ၎င်း ကျောက်တုံး သည် လေးဘက် လေးတန်မှ လင်းဝင်း တောက်ပ ခဲ့လေသည်။ ထိုအခါ ဟဂ်ျရိ အတ်စ်ဝဒ် လင်းဝင်း တောက်ပ ခဲ့သည့် နယ်နမိတ် ပတ်ပတ်လည် တစ်ခုလုံး ကို အလ္လာဟ် အသျှင်မြတ် (စွဗ်ဟာနဟူ ၀သအာလာ) မှ ဟရာမ် နယ်နိမိတ် အဖြစ် သတ်မှတ်တော် မူခဲ့၏။
ကာဇီ အိယားဇ် သခင် က ရှေဖာကျမ်း တွင် ရေးသား ခဲ့သည်မှာ- တမန် တော်မြတ် (ဆွလ္လလ္လာဟု အလိုင်ဟိ ၀စလ္လာမ်) ဤသို့ မိန့်တော်မူ ခဲ့၏။
အကြင် သူသည် ဟဂ်ျရိ အတ်စ်ဝဒ် ၏ အနီးတွင် အလ္လာဟ် အသျှင်မြတ် (စွဗ်ဟာနဟူ ၀သအာလာ) ထံ ဒိုအာ တောင်းခဲ့ သော် အလ္လာဟ် အသျှင်မြတ် (စွဗ်ဟာနဟူ ၀သအာလာ) သည် ၎င်းဒိုအာ ကို လက်ခံတော် မူ လိမ့်မည်။
သုရ်သူးစ် (ရဟ်မ သုလ္လာဟ် အလိုင်းဟ်) ရေးသား ခဲ့သည်မှာ- ဟဂ်ျရိ အတ်စ်ဝဒ် ၏ ထူးခြားမှု တစ်ခု သည် ဤသို့ ဖြစ်သည်။ မီး၏ အပူသည် ၎င်း အပေါ်သို့ သက်ရောက်ခြင်း မရှိ၊ ၎င်း ကျောက်တုံး သည် အမြဲ တစေ အေးမြ နေသည်။ ၎င်း ကျောက်တုံး သည် ရေ၌ နစ်မြုတ်ခြင်း မရှိ၊ အကယ်၍ ရေထဲ ကျသွား သော် ခြောက်သွေ့ နေသော သစ်ကိုင်း တစ်ကိုင်း ကဲ့သို့ ရေပေါ်တွင် ပေါ်နေမည်။
“အဖြူရောင် မှ အနက်ရောင် သို့”
ဟဂ်ျရိ အဆ်ဝဒ် နှင့် ပတ်သက်၍ တချို့သော အကြောင်း အရာ (သမိုင်း) များကို သိပြီး သည့်နောက် စာဖတ်သူ အတွက် ၎င်း ဟဂ်ျရိ အဆ်ဝဒ် သည် အစ ပထမ က အဖြူရောင် ဖြစ်ပါလျက် ၎င်း၏ နာမည် ကို ဟဂ်ျရိ အဆ်ဝဒ် (ကျောက်နက်) ဟု အဘယ့်ကြောင့် ထားခဲ့ရ သနည်း ဟူသော မေးခွန်း တစ်ခု ပေါ်လာမည်။
ဤ မေးခွန်း ၏ အဖြေမှာ အနည်းငယ် မျှ ပြောရုံဖြင့် လုံလောက် ပါသည်။ ဟဂ်ျရိ အဆ်ဝဒ် ၏ သမိုင်းမှာ ဟဇ်ရသ် အာဒမ် (အလိုင်ဟိစ် စလာမ်) လက်ထက်တွင် ဟဂ်ျရိ အဆ်ဝဒ် ကို တွေ့ရှိ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ သို့သော် ခေတ် ကာလ နှင့် အပြော အဆို ပြောင်းလဲမှု အပေါ်တွင် ၎င်း နာမည် သည်လည်း ပြောင်းလဲ လာသည်။ ဟဂ်ျရိ အဆ်ဝဒ် ဆိုသည့် နာမည်သည် ဒွန္နယာ့  အာရဗီ စကား ပျံ့နှံ့ လာသည့် အချိန်တွင် တွင်ကျယ် ခဲ့သည်။ ဟဂျရ် ဆိုသည့် စာလုံး ၏ အဓိပ္ပါယ် မှာ ကျောက်ခဲ ဖြစ်သည်။ အဆ်ဝဒ် ၏ အဓိပ္ပါယ် မှာ အလွန် မဲနက် သည်ဟု အဓိပ္ပါယ် ရသည်။ ယခု ကာလ ၌ ကအ်ဗဟ် ၏ နံရံ၌ ချိတ်ထားသော ကျောက်မှာ ဟဂ်ျရိ အဆ်ဝဒ် ဟူသော သီးသန့် အမည် ဖြစ်လာသည်။
အချို့ ဟဒီးဆ် ကျမ်းစာအုပ် များတွင် ဟဂ်ျရိ အဆ်ဝဒ် ဟူသော အမည် အပြင် ရုကနိ အဆ်ဝဒ် ဟုလည်း သုံးနှုံး ထားသည်။ အခြား အမည် များလည်း ရှိသေးသည်။ ဟဂ်ျရိ အဆ်ဝဒ် သည် ယခင်က ဖြူခဲ့သည် နှင့် ပတ်သက် ၍ တမန် တော်မြတ် (ဆွလ္လလ္လာဟု အလိုင်ဟိ ၀စလ္လာမ်) ၏ ဟဒီးဆ်တော် အပြင် မျက်မြင် ကိုယ်တွေ့ တင်ပြချက် များလည်း ရှိသည်။
ဃာဇီ အဇီဇုဒ်ဒီးန် က ပြောကြား သည်မှာ- ကျွန်ုပ် သည် ဟဂ်ျရီ (၇၀၈) ခုနှစ် ဟဂ်ျ တွင် ဟဂ်ျရိ အဆ်ဝဒ် ၏ အပေါ်ပိုင်း ၌ အဖြူရောင် အစိတ် အပိုင်း ကို တွေ့ ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်း တွင် ထို အဖြူ လည်း အနက်ရောင် သို့ ကူးပြောင်း သွားသည်။ ဤ ကဲ့သို့ပင် အိဗ်နေ့ ခလီးလ် (ရဟ်မ သုလ္လာဟ် အလိုင်းဟ်) သခင် ကလည်း- ကျွန်ုပ် သည် ဟဂ်ျရိ အဆ်ဝဒ် ၏ နေရာ (၃) ခုတွင် အဖြူရောင် ကို တွေ့ခဲ့၏။ ၎င်း အဖြူရောင် သည်လည်း အနက်ရောင် သို့ ကူးပြောင်း သွား ခဲ့၏ ဟု မိန့်ခဲ့သည်။
“ဟဂ်ျရိ အဆ်ဝဒ် နှင့် ပတ်သက်၌ ပြဿနာ ဖန်တီးခြင်း”
ဟဂ်ျရိ အဆ်ဝဒ် ၏ သမိုင်း တွင် များစွာသော အဖြစ် အပျက်များ ရှိခဲ့သည်။ ယင်း အဖြစ် အပျက်များ ထဲမှ ဟဂ်ျရိ အဆ်ဝဒ် နှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြဿနာ ဖန်တီးမှု အကြောင်း အရာ တို့သည် စိတ်ဝင်စား စရာ ကောင်းသည့် အပြင် သံဝေဂ ယူစရာ လည်း ဖြစ်သည်။ သမိုင်း ပညာရှင် များက ရေးသား ခဲ့ကြ သည်မှာ- –
ဟဂ်ျရိ အဆ်ဝဒ် ကို တည်နေရာ မှ သယ်ထုတ် ရန် (သို့ ) ဖျက်ဆီးရန် နည်းလမ်း မျိုးစုံ ဖြင့် ကြိုးစား ခဲ့ကြသည်။ ၎င်း တို့မှာ ဂျွန်ဟမ် အုပ်စု (၃)မျိုး၊ အေယားဒ် အုပ်စု၊ အမာလကဟ် အုပ်စု၊ ခေဇာဒဟ် အုပ်စု၊ ကရာမရ် အုပ်စု တို့ ဖြစ်ကြသည်။
၎င်း တို့သည် ကအ်ဗဟ် မှ အကြိမ်ကြိမ် ထုတ်၍ ယူသွား ခဲ့ကြသည်။ ၎င်း တို့၏ ရည်ရွယ်ချက် မှာ ကအ်ဗဟ် နှင့် တုပြိုင်၍ ဗိုင်သုလ်လာဟ် အတု တည်ဆောက် ရာ၌ အသုံးပြုရန် ဖြစ်သည်။ အလ္လာဟ် အသျှင်မြတ် (စွဗ်ဟာနဟူ ၀သအာလာ) ၏ ဗိုင်သုလ်လာဟ် အစစ် ၏ ကြီးကျယ်မှု ပျောက်ကွယ် သွားရန် ကြံစည် ခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း ဤ အုပ်စု များ၏ ကြိုးစားမှု တို့သည် အောင်မြင်မှု မရရှိ ခဲ့။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် ဟဂ်ျရိ အဆ်ဝဒ် သည် မိမိ၏ တည်နေရာ မှ အချိန် ကြာမြင့်စွာ ခွဲ၍ မနေပါ။ မိမိ၏ မူရင်း တည်နေရာ သို့ အလွန် လျင်မြန်စွာ ဖြင့် ပြန်ရောက်လာ ခဲ့၍ ဖြစ်သည်။
သမိုင်း ပညာရှင် များက ရေးခဲ့သည်။ ယဇီးဒ် ဘင်န် မအာဝိယဟ် (ရဒွိယလ်လာဟု အန်ဟု) ၏ အမိန့်ဖြင့် ဟုစွိုင်းန် ဘင်န် နမီးရ် သည် ဟဇ်ရသ် အဗ်ဒုလ္လာဟ် ဘင်န် ဇုဘိုင်ရ် (ရဒွိယလ်လာဟု အန်ဟု) နှင့် စစ်တိုက်ရန် အတွက် မက္ကဟ် မြို့တော် သို့ စစ်တပ် နှင့် အတူ ချီတက် လာသည်။ ထို အချိန်၌ အိဗ်နေ့ ဇုဗိုင်ရ် သခင် သည် မိမိ ၏ နောက်လိုက် များနှင့် အတူ ကအ်ဗဟ် ကျောင်းတော် ၏ ပရ်ဝုဏ် ဖြစ်သော မစ်ဂျိဒိလ် ဟရာမ် တွင် ခိုလှုံ ခဲ့သည်။ ၎င်းနောက် နေပူဒဏ် မှ ကာကွယ်ရန် အတွက် မိုးကာ တဲများ ပြုလုပ် ကြသည်။ ဟုစွိုင်းန် ဘင်န် နမီးရ် သည် မက္ကဟ် မြို့တော် သို့ ၀င်ရောက်၍ အဘူ ကဘီးစ် တောင်နှင့် ၎င်း၏ အရှေ့ဘက် တွင် တဲများ တည်ဆောက်၍ ဟဇ်ရသ် အိဗ်နေ့ ဇုဘိုင်ရ် နှင့် ၎င်း၏ နောက်လိုက်များ အပေါ်သို့ ခဲများဖြင့် ပစ်ပေါက် ခဲ့သည်။ ထို ကဲသို့ ခဲများ ပစ်ပေါက်ခြင်း ကြောင့် ကအ်ဗဟ် ကျောင်းတော် ၏ အဆောက် အဦး လွန်စွာ ပျက်စီး သွားခဲ့ ရပြီး ဂိလာဖ် (ခြုံထည်) သည်လည်း အစိတ်စိတ် ဖြစ်သွား ခဲ့ရသည်။
ကအ်ဗဟ် ကျောင်းတော် ၏ အုတ်နံရံ များတွင် လည်း ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်များ ဖြစ်ပေါ် ခဲ့သည်။ တိုက်တိုက် ဆိုင်ဆိုင် ယင်းသို့ ခဲများဖြင့် ပစ်ပေါက် နေစဉ် မှာပင် ဟဇ်ရသ် ဇုဘိုင်ရ် သခင်၏ အပေါင်း အဖော် များ၏ ရွက်ဖျင် တဲမှာ မီးစွဲလောင် လေတော့၏။ ကအ်ဗဟ် ကျောင်းတော် ၏ ဂိလာဖ် (ခြုံထည်) မှ အပ သစ်ဖြင့် ပြုလုပ် ထားသော အစိတ် အပိုင်းများ မီး ကူးစက် လောင်ကျွမ်း ခဲ့သည်။ ထို အကြောင်းကြောင့် မက္ကာမြို့ နှင့် ဆီးရီးယား ၌ နေထိုင်း သူများ၊ အထူး သဖြင့် ဟုစွိုင်းန် ဗင်န် နမီးရ် နှင့် ၎င်း၏ အဖွဲ့သား များသည် အလွန် ကြောက်ရွံ့ တုန်လှုပ် သွားခဲ့သည်။ ထို ကြောက်ရွံ့ စိုးရိမ် မှုကြောင့် (၂၉)ရက် ကြာ ၀ိုင်းရံ ထားမှုကို ရုပ်သိမ်း လိုက်ကြသည်။
ထို ရက်များ အတွင်း ၌ပင် ဟဇ်ရသ် မအာဝိယဟ် (ရဒွိယလ်လာဟု အန်ဟု) သခင်၏ သားတော် ယဇီးဒ် သေဆုံးကြောင်း သတင်း ရရှိ သည့် အတွက် ဟုစွိုင်းန် ဗင်န် နမီးရ် သည် ဆီးရီးယား သို့ ပြန်လှည့် သွားခဲ့ ကြသည်။
ထို့ နောက်ပိုင်း တွင် အဗ်ဒုလ္လာဟ် ဗင်န် ဇုဘိုင်းရ် (ရဒွိယလ်လာဟု အန်ဟု) သခင် အနေနှင့် ဗိုင်းသွလ္လာဟ် ၏ ပျက်စီး ယိုယွင်း သွားသော အစိတ် အပိုင်း များအား ဟဇ်ရသ် အိဗ်ရာဟီးမ် (အလိုင်းဟိစ္စလာမ်) သခင် ၏ ရှေး ယခင် အဆောက် အဦး ကဲ့သို့ အသစ် ပြန်လည် ဆောက်လုပ် ခဲ့လေသည်။
တင်ပြ ခဲ့သော ဖြစ်ရပ်၌ ဟဂ်ျရိ အဆ်ဝဒ် ကျောက်နက် သည် မီးလောင်ကျွမ်း ခဲ့သည့် အတွက် သုံးပိုင်း ကွဲအက် သွားလေသည်။ ဟဇ်ရသ် အဗ်ဒုလ္လာဟ် ဗင်န် ဇုဘိုင်းရ် (ရဒွိယလ်လာဟု အန်ဟု) သခင် အနေနှင့် ထို အပိုင်း အစ များကို ငွေဖြင့် ကွပ်ပြီး ငွေရည် ဖြင့် ခိုင်ခန့် အောင် ပြုလုပ် ပြီးနောက် ကအ်ဗဟ် ၏ နံရံ၌ မြှုပ်နှံ လိုက်လေသည်။
ထို ကွဲအက် သွားသည့် ကျောက်နက် ၏ အစိတ် အပိုင်း အစငယ် တစ်ခု သည် ဗနုရှိုင်ဗာ မျိုးနွယ် မှ ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦး ထံ၌ နှစ် အတော် ကြာသည် အထိ ရှိခဲ့ လေသည်။
ခေတ် ကာလ အတန်ကြာ ပြီးနောက် အဗ္ဗာစီ ခလီဖာ များခေတ် ဟာရူးန် ရရှီးဒ် ဘုရင် လက်ထက်၌ အထက်ပါ ငွေဖြင့် ကွပ်ထားသော ဟဂ်ျရိ အဆ်ဝဒ် ၏ အပိုင်း အစ များသည် တဖြည်းဖြည်း ချောင်၍ ထွက်ကျ သွားမည်ကို စိုးရိမ် ရသောကြောင့် ဟာရူးန် ရရှီးဒ် ဘုရင်သည် ကအ်ဗဟ် ၏ နံရံ အတွင်းထိ မြုတ်ဝင် အောင် အပေါက် ပြုလုပ်၍ ငွေရည် သွန်းလောင်း လိုက်လေသည်။ ထို့ကြောင့် ကျောက်နက်၏ မျက်နှာပြင် ညီညာမှု ဖြစ်စေ သည် သာမက လုံခြုံမှု ကိုလည်း ပို၍ ဖြစ်စေသည်။
သမိုင်း များ၌ ကျောက်နက် အား ကအ်ဗဟ် ကျောင်းတော် ကြီး၏ နံရံမှ အပြင်သို့ ထုတ်ပြီး မူရင်း ပုံစံ အား ပြုပြင် ပြောင်းလဲ ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဟိဂ်ျရီ (၃၁၇) ခုနှစ် ၏ ဖြစ်ရပ် တစ်ခု ကို သိရှိ ရသည်။
၎င်း ခုနှစ် အကုန်ပိုင်း ဇုလ်ဟဂ်ျလ (၈) ရက်နေ့ ၌ အဘူ သွာဟိရ် စူလိုက်မာန် ဗင်န် ဟစံန် ကုရ်မသွီ ဆိုသူသည် မက္ကာမြို့ အား တိုက်ခိုက် အောင်မြင် ၍ ဟာဂျီ များကို လုယက် တိုက်ခိုက်ပြီး ကအ်ဗဟ် ကျောင်းတော် ၏ အနီး နားရှိ လျှိုမြောင်း များ၌ သွေးချောင်း စီးလု မတတ် သတ်ဖြတ် ခဲ့လေသည်။
ဤ တိုက်ခိုက် မှု၌ မည်မျှ အပြစ်မဲ့ သော ဟာဂျီများ အသတ်ခံ ရသည်ကို ခန့်မှန်း၍ ရနိုင် ပေသည်။ ဇမ်ဇမ် ရေတွင်း ၌လည်း ဟာဂျီ များ၏ အလောင်း များဖြင့် ၀န်းရံ နေခဲ့သည်။
ထို တိုက်ပွဲ ဖြစ်နေ ချိန်တွင် ထို ဇွာလင်မ် ကုရ်မသွီ ဆိုသူသည် ကအ်ဗဟ် ၏ အမိုး ပေါ်သို့ တက်၍ ရွေရေ တံလျောက် အား ဖျက်ဆီးရန် ကြံရွယ်၍ အပေါ်သို့ တက်ရာ ဇောက်ထိုး ပြုတ်ကျ၍ ထို နေရာ ၌ပင် အသက်ထွက် သွားရ လေသည်။
ထို တိုက်ပွဲ ဖြစ်ချိန် တွင် ကုရ်မသွီ သည် ကျောက်နက် အား ကအ်ဗဟ် မှ ဖြုတ်ယူ၍ ကူဖွာ မြို့သို့ ယူဆောင် သွားပြီး ဂျာမေ့အ် ဗလီ၏ တိုင် (၇)တိုင် ၌ ချိတ်ဆွဲ ၍ လာမည့် နှစ်မှ စပြီး ဟဂ်ျ ပြုလုပ်ရန် အတွက် ကအ်ဗဟ် ရှိရာ မက္ကာမြို့ အစား ကူဖွာမြို့ ၌ပင် ပြုလုပ် ရမည် ဟု ပြောဆို ခဲ့သည်။ သို့သော် သူ၏ ကြံစည် မှုသည် မအောင်မြင် ခဲ့ပေ။
ခလီဖာ မုသွီ အုလ္လာဟ် အဗုလ် ကာစင်မ် လက်ထက်၌ အချို့ သမိုင်း ပညာရှင် များ၏ အသိပေး ချက်အရ အဗုလ် အဗ္ဗာစ် အလ်ဖားစ် အလ်ဖသ်ွလ် ဗင်န် အလ်မုက်သဒိရ် ဆိုသူသည် ဒီနာရ် ရွှေဒင်္ဂါးပြား သုံးသောင်း ဖြင့် ကုရ်မသွီ လူမျိုးများ ထံမှ ပြန်လည်၍ ၀ယ်ယူပြီး ဟိဂ်ျရီ (၃၃၉) ခုနှစ်၌ မက္ကာမြို့ သို့ ပြန်လည် ယူဆောင် လာပြီး ၂၂နှစ်တာ ကြာ ဝေးကွာ ခဲ့သော ဟဂ်ျရိ အဆ်ဝဒ် ကျောက်နက် အား ကအ်ဗဟ် ၏ နံရံ၌ ပြန်လည် မြှုပ်နှံ ထားရှိ ခဲ့ရ လေသည်။
မုဖ်သီ အိဒ်ရီးစ် (မဇွာဟေရီ)
အလ်မီဇားန် အတွဲ(၂) မှ ….
This entry was posted in ဟာဒိစ်ကဏ္ဍ, ဆောင်းပါး. Bookmark the permalink.
Aqida Ahle Sunnaut Waljamaat အာကီဒါအဟ်လေ့စွန္နတ်ဝလ်ဂျမာအတ်ဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်များ